	Sheekadii Zakaria Osman: Kacdoon ka dhan ah tahriibiyayaasha - Telling the Real Story
Zakaria Cusmaan waa nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Borama, Soomaaliya. Wuxuu ahaa da 'yarta dugsiga sare markii uu go’aansaday inuu tago Yurub si uu shaqo u helo mustaqbalkiisana u dhiso. Wuxuu ku lahaa asxaabtii kuwa safray oo soo dhigayey baraha ay bulshadu ku kulanto.
“Hamigeygu wuxuu ahaa inaan gaaro Yurub oo aan shaqo helo, laakiin dhallinyarradu isku mid ma aha. Qaarkood waxay u safraan oo sawirro ku diraan Facebook. Way marin habaabiyaan kuwa wadankooda jooga laakiin sidoo kale way dhiirigeliyaan.”
Tahriibayaashu waxay u sheegeen inay sii joogi doonaan Yemen maalmo kooban laakiin waxay noqotay laba bilood. Zakaria iyo asxaabtiisu waxay noqdeen kuwo samir muujinaya waxayna banaanbax ka dhigeen xerada iyagoo dalbanaya inay aadaan Suudaan taas oo cadho galisay tahriibiyayaasha . Safarkii uu ku tegay Badda Cas ee Suudaan wuxuu ahaa mid naxdin leh. Shaqaalaha markabka ayaa isku dayay inay kufsadaan gabar iyadoo Zakariye iyo asxaabtiisa ay ku qasbanaadeen inay difaacaan. Laakiin Suudaan safarkiisa wuxuu ahaa kii ugu xumaa.
Gaarigu wuxuu ku socday xawaare sare. Cidna lama dananeyn haddii uu qof ka dhaco. Baabuurkii aan ku jiray, mid ka mid ah gabdhaha ayaa xanuunsaday. Gaarigii ayaan garaacnay. Qoryo bay qaateen oo laba xabadood ayay ku rideen cagaheenna. Waxay ku yidhaahdeen, Haddaad rabto inaad dhimato, tag. Dhinac waa saxarihii dhinaca kalena waa saxarihii. Liibiya, Suudaan, iyo Masar waa lamadegaan. Ma jirto meel aad ka bixi karto, waa inaad gaariga kujirtaa.”
May haysan waxay cunaan maalmo badan markii ay yimaadeen xerada tahriibiyayaasha ee liibiya way daciifeen manay baxsan karayn sidii ay u soo qorsheyateen. Waa la qabtay oo la jirdilay si ay qoysaskooda ugu qasbaan inay lacag diraan. Waxaa halkaas lagu hayey muddo saddex bilood ah oo si xun ayaa loogu garaacayey maalin kasta.
Ugu dambeyntiina intaa ka badan umaydul qaadan karayn waxanay isku dayeen inay ka baxsadaan xabsiga. Waxay burburiyeen alaabta guriga laakiin darbiyadu waxay ahaayeen kuwo aan la taaban karo oo aan la burburin karin. tahriibiyayaashii waxay ku burburiyeen kacdoonkii hub iyo gaasta indha kaga ilmaysiisa waxayna aargoosi u dileen 12 qof.
Þ Ka dib markay lacagtii bixiyeen waxay bilaabeen safarkii xeebta. Zakaria muddo sedex maalmood ah ayey ku qaadatay badda dhexdeeda. Waxay arkeen maraakiibta reer Yurub oo masaafada dheer u jirta, iyo diyaarad lagu arkay iyaga laakiin cid caawisaa umay iman.
Waxayse badbaadiyeen markab Liibyan ah oo dib loogu celiyay Liibiya. Zakaria ayaa la xiray oo ugu dambeyntiina waa la sii daayey wuxuu xaqiiqsaday in safarkiisa uu ahaa mid aan micne lahayn. Wuxuu go’aansaday inuu aqbalo dalabka si dib loogu celiyo.
Wuxuu hadda uga digayaa dhalinyarada Soomaaliyeed khatarta ay leedahay tagista Liibiya.
" Waxaan ka caawiyay dhalinyaro badan inay ka fogaadaan safarka ay la galayaan tahriibiyaasha. Waxaan tagnay iskuulo iyo jaamacado aan ka samaynay wacyigalin. Markaan xasuusto kuwii ila joogay ee yimi Yurub, waxaan sidoo kale xasuustaa kuwii ila joogay ee dhintay. Waxaan u sheegay nafteyda, hadaan ku dhinto halkaas waxba kaman helin adduun iyo aakhiro. Taasi waa waxa aan aaminsanahay. ”